Izinto zokuthambisa zamadoda: Unyango lwasekhaya kubuso bendoda | Amadoda aQinisekileyo
Akusekho kunqabile ukubona amanene ayindoda ulungiselela iimaski ukuphucula ukubonakala kobuso bakho. Lixesha lokuba ufunde amayeza asekhaya ebusweni bakho.
Njengabafazi, kukho indibaniselwano yazo zonke iintlobo zolusu kunye neengxaki: ulusu olunamafutha, amaqhakuva, ukukhupha, ukomanjl. Ewe, yonke into iya kuxhomekeka kwiimpawu ezithile zomntu ngamnye.
1 Imaski yeavokhado
2 Ikhukhamba kunye nomxube obomvu weapile
3 Imaski esekwe kwiyogathi
4 Unyango lwasekhaya lobuso: ukukhuhla kwe-hazelnut
Owona msebenzi uphambili kukondla isikhumba esomileyo. Ngokusisiseko yonke into oyifunayo yiavokhado kunye nepuni encinci yeoyile yomnquma. Into ebalulekileyo kukudibanisa zombini izithako kude kube yincindi efanayo. Emva koko siyivumele isebenze imizuzu eyi-15 kwaye ihlambe kakuhle.
Ikhukhamba kunye nomxube obomvu weapile
Ngokungafaniyo neyokuqala, le inikezelwe kulusu olunamafutha. Ukulungiselela isisombululo, Siza kujoyina isiqingatha sekhukhamba nesiqingatha seapile ebomvu. Zombini iziqhamo kufuneka zityunyuzwe ukuze kamva wongeze iqanda elimhlophe kunye nejusi yelamuni encinci. Xa ujoyina yonke into, siyibeka ebusweni ubuninzi bemizuzu eyi-10 emva koko siyisuse ngamanzi ashushu.
Imaski esekwe kwiyogathi
Olu lolunye lwezona zilungiso zilungileyo zasekhaya kubuso bendoda. Sifuna kuphela amacephe ama-3 eyogathi, iswekile ezimbini kunye nejusi yelamuni encinci. Ukuzixuba kuya kwenza uncamatheliso esiya kulusebenzisa ebusweni; Kuqala siza kuphulula umzimba kwaye masiyiyeke iphumle imizuzu emi-5. Njengoko sibona, olu luhlobo lokukhuhla ekhaya.
Unyango lwasekhaya lobuso: ukhuhla lwehazelnut
Sinetyala nje jonga i-hazelnut flakes, enobusi obuncinci kunye nejusi yelamuni. Siza kuvumela oku kulungiselela kube yimizuzu engama-20 kwaye ekuqaleni siza kuthambisa ngendlela ejikelezayo. Oku kungavaswa ngamanzi abandayo.
Iitaboos kufuneka zibe zexesha elidlulileyo: uluntu lwangoku lufuna ukuba amadoda axhalabele ukhathalelo lwabo lobuhle.
Imithombo yemifanekiso: IKambid.es / ibhlog yeYouTube
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Unyango lwasekhaya lobuso bendoda yenkulungwane yama-XNUMX
Impembelelo yokudibanisa i sweatshi ezinombala ekwindla ingqokelela ka-2018
Ukujonga ngokulula ngokubanzi kunye nogqithiso olufudumeleyo